Dagaal Ka Dhacay Duleedka B/weyne
Waxaa jirta cabsi daran oo ah in safarka Farmaajo ee Kenya uu
daaran yahay ujeeddooyinka la sheegay maahee qaar kaloo qarsoon. Armaa uu Farmaajo mindiyaha u afeysanayaa inuu Kenya ku wareejiyo baddii Soomaliyeed oo ay dacwadu ka socotay?
Soomaali meel kastoo ay joogtaba ha tashato. Baddii Soomaaliyeed, sida muuqata waa sii SALAG LEEDAHAY!
Suheyl deni says:
Tallman wanku salaamey awalan , waxad ka hadashey arimo xasasiya oo tabanaya waqica jira oo marag ma doontada taaso ah in baddi Soomaaliyed oo horey loo biic geeyey marlabaad biic lagu sameynayo oo owal lacag lagu iib geeyey se hada dano beeled ba lagu iib geyn.
Waxeynu wada ognahey in farmajo beshisu aysan aad ugu muuqan masraxyada siyasaded ama xileed ee degaan goboledkoda jubaland inkasto kursiga dalka ugu sareya ay hada haystaan taso usahli karta in ay kor ukacan walow uusan xita siyad bare horey waxba ugaga qaban booskas ay 21 sano heysten iyo 4 sano oo hada farmajo u hayey taaso isku noqoneysa 25sano oo kursiga dalka ugu sareya ay heysten taaso aysan jirin beel kamida beelaha Soomaaliyed oo nasiib uheshay mudo intas le’eg iney dalka xukuman.
Arinta badda hadan kuso noqdo waxaa hubaal qodobadan kor ku xusan iney yihin qodobo iftiimin kara mustaqbalka farmajo iyo beshisa gabi ahaan. Tusale
A. In axmed madoobe laga horleexiyo weynu ognaheyna in axmed madoobe uu yahey mid kamida caqabadaha farmajo legdanka kula jiro.
B. In beeshiisu ka muuqato masraxyada siyasaded ee degaan goboledkoda jubaland taaso unoqoneysa guula waarta oo aan is bedel laheyn
C. In lagu taakuleeyo farmajo muruq iyo maalba inuu dib ugu so laabto kursiga dalka ugu sareya ee madaxtinimo taaso ah iyaduna guul iyo riyo farmajo muddo badan la seexan waayey.
Hadaba intaas oo benefit ah umaleyn mayo in farmajo ka leexanayo lana guti mayoh oo biyo lama ahe waxeynu aragna wa kiiski badda oo maxkamada icj lagaso qaadey walow ay nagu tahey dhaawac iyo jab aan lagaso kaban karin abid.
Ugu dambeyn rabi heyno sahlo dalkan afsomali laguma matali kare wadaniyad sii jirta lagu dhisi kara dhalinyaro…….mhadsanid tallman.
Leave a Reply to Suheyl deni Cancel reply
canadian pharcharmy online http://www.cialij.com/...
Vgafnm asmtmd canada online pharmacy Nluxg...
Rvtbgd avaigu canadian pharmacy Akpjl...
Ouwtau fxvbve canada pharmacy Gxpdm...
Xvnjva bkvtwo cvs pharmacy Alfte...